Kônsily ekiomenika: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Kônsily ekiomenika: Fahasamihafan'ny versiona
Kônsily ekiomenika (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 10:09
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Jolay 2019 à 13:43 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 10:09 (hanova) (esory)
Io kosily io dia nanameloka ny fampianaran'i Makedoniko sy ireo pneomatomaka izay nanda ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina. Nohamafisiny ny maha Andriamanitra an'i Kristy sady nambarany fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina ary noraiketiny ilay fanekem-pinoana natao tamin'ny konsily voalohany tao Nikea. Io konsily io koa no nanome fahamboniana fara tampony ny evekan'i Roma sy ny an'i Kostantinoply amin'ny eveka rehetra.
=== Ny Konsily tao EfesoEfesosy (taona 431) ===
Ny [[Konsily tao Efeso|Konsily tao Efesosy]] (na EfesosyEfeso na Efezy) dia nanapahana ny maha [[Renin'Andriamanitra]] (gr.: ''Theotokos'') an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]]. Iono konsily fahatelo. Nivoaka noho izany ny Fanekem-pinoan'i Efezy. Tsy eken'ny Protestanta ny fiantsoana an'i Maria ho Renin'Andriamanitra. Nitsipahana ny [[nestorianisma]] koa izany.
Nanambara ny maha tokana tsy mizara an'i Kristy hatrany am-bohoka ny konsily sady niantso an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] hoe ''[[Theotokos]]'' ("Renin'Andriamanitra"), izany hoe renin'ilay Andriamanitra ara-natiora. Nohelohiny ny fampianaran'i Nestoriosy, patriarkan'i Konstantinopoly izay nampianatra (mba tsy hampifangaroana ny olona atao hoe [[Jesosy]] sy ny Logos izay an'Andriamanitra) fa i Maria Virjiny dia tsy niteraka afa-tsy olombelona izay manana fifamatorana tsy azo foanana amin'ny ''Logos''n'Andriamanitra. I Nestoriosy mantsy dia nampianatra fa miara-misy ireo natioran'i Kristy roa ireo nefa misaraka. I Kirilosy avy any Aleksandria dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fanapahan-kevitra tamin'io konsily io. Nitsipaka io fanapahan-kevitry ny konsily io ireo Fiangonana nestoriana sady nisaraka tamin'ny Fiangonan'ny Empira.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974784"